Ny mpamokatra sy ny orinasa MRI manontolo manontolo | CSJ
Tsy misy endriny ankehitriny eddy
Manome fanaingoana manokana
Banga amin'ny marary:
DSV azo sary:
Magnetic Resonance Imaging (MRI) dia teknolojia fanaovana sary tsy manafika izay mamokatra sary anatomika antsipiriany telo dimensional. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fitiliana ny aretina, ny diagnostika ary ny fanaraha-maso ny fitsaboana.
Ny scanner MRI dia mifanentana indrindra amin'ny sary an'ireo faritra tsy taolana na tavy malemin'ny vatana. Izy ireo dia tsy mitovy amin'ny tomography compute (CT), amin'ny tsy fampiasan'izy ireo ny taratra ionizing manimba taratra x. Ny ati-doha, ny tadin'ny hazon-damosina ary ny hozatra, ary koa ny hozatra, ny tadin-taolana, ary ny tadin-taolana dia hita mazava kokoa amin'ny MRI fa tsy amin'ny taratra x sy CT mahazatra; noho izany antony izany dia matetika MRI no ampiasaina hanehoana ratra amin'ny lohalika sy ny soroka.
Ao amin'ny ati-doha, ny MRI dia afaka manavaka ny fotsy sy ny volondavenona ary azo ampiasaina ihany koa hamantarana ny aneurisma sy ny fivontosana. Satria ny MRI dia tsy mampiasa taratra x na taratra hafa, dia ny maoderina safidy an-tsary rehefa ilaina ny maka sary matetika amin'ny diagnostika na fitsaboana, indrindra ao amin'ny ati-doha.
MRI dia mampiasa andriamby mahery izay mamokatra sahan'andriamby matanjaka izay manery ny proton ao amin'ny vatana hifanaraka amin'izany saha izany. Ny andriamby no singa fototra amin'ny rafitra MRI, ary ny tanjaky ny andriamby, ny fitoniana ary ny fitoviana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny sary MRI.
Ny andriamby maharitra novokarin'i CSJ, izay azo ampiasaina amin'ny fizahana ny vatana iray manontolo, dia mandray fitaovana avo lenta tsy dia fahita firy eto an-tany, famolavolana famoretana ankehitriny, manatsara ny firafitry ny andriamby, mitana faritra kely, ambany ny vidin'ny fametrahana, ary manana mari-pahaizana ambony ny fisokafana, ny fikojakojana ny rafitra ambany ary ny vidin'ny asa.
1, Herin'ny Magnetika: 0.1T, 0.3T, 0.35T, 0.4T
2 opening Fanokafana andriamby:> 390mm
3, faritra fanamiana sary:> 360mm
4 weight Mavesatra andriamby: 2,8 taonina, 9 taonina, 11 taonina, 13 taonina
5, Volavola fanakanana Eddy ankehitriny
6 、 Manome fanaingoana manokana
Teo aloha: EPR-72
Manaraka: Andriamby tokana
3.0T Andriamatoa Veterinary
0.4T Magnet mahery vaika